LPlayer, mutambi weminimalist kune avo vanongoda kuteerera mimhanzi | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu yapfuura takataura newe nezve Vatambi vemimhanzi yekushandisa paGnu / Linux. Tinofanira zvakare kutaura kuti chero kugoverwa kweGnu / Linux kunopa mutambi wemimhanzi pamwe neprosesa yeshoko.
Mune ino kesi isu tichaenda kukuudza nezvako LPlayer, minimalist uye isina uremu multimedia player Iyo inoshanda zvakakwana pane yakaderera-zviwanikwa makomputa (uye zvakare kune epamusoro-zviwanikwa makomputa). LPlayer inoshanda mune chero kupi kugoverwa asi isu tinofanirwa kutaura kuti inogona kungoiswa mune zvinogoverwa zvinovakirwa pairi paUbuntu, paLinux Mint kana muUbuntu.LPlayer mutambi we minimalist akagadzirwa naAtareao. Iyo yemahara uye yemahara mutambi ine yakasarudzika sarudzo uye kuitira kugutsa vashandisi vanongoda kuteerera mimhanzi uye podcast. LPlayer inoshanda seyakare WinAmp, ndokuti, isu tinogadzira zvinyorwa zvemafaira uye mutambi anoiridza iyo nekumhanya kwatinoda, ine mabass uye treble yatinoda tichitenda kune yakaenzana, uye / kana kubvisa nzvimbo dzisina chinhu pakati odhiyo neodhiyo.
Uyu mutambi anotsigira chikuru mafomu ekuteerera: Mp3, M4a, Flac uye Ogg. Aya mafomati ndiwo anozivikanwa kwazvo pakati pemapodcast uye nziyo dzemimhanzi
LPlayer inoshandisa MRPIS inoita kuti isu shandisa iyi yekuwedzera yeGnome uye ubatanidze mutambi ne desktop. Muchiitiko cheCinnamon, kuwedzerwa kwakadaro hakuna basa uye inosangana yakananga kudesktop.
Tinogona kuisa LPlayer kuburikidza neppa repository rebasa, nekuti izvi tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera:
Kana tichida kuiisa mune kumwe kugovera tinofanirwa kuve neruzivo rwepamusoro toenda ku github repository de Atareao kwatichawana kodhi yacho. Tinogona zvakare kutaura nemusiki weLPlayer uye ndokumbira kuburitswa kwayo kune kumwe kugovera. Chero zvazvingaitika, kune avo vari kutsvaga kureruka, LPlayer isarudzo yakanaka, zvirinani pane mamwe akazara uye anorema seAmarok kana Rhythmbox.
Kwayaka uye Rumwe ruzivo - Kubatikana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LPlayer, mutambi weminimalist kune avo vanongoda kuteerera mimhanzi
Iyo ine mamwe madhiri uye zvinosiririsa zvichibva pane yayo Github repository zvinoita sekunge kukura kwayo kwakamira :(
Dzokorora chizere-chinyorwa chinyorwa chishandiso cheLinux